Namibia na-emechi saịtị ihe nketa ndị njem na ihe ntụzịaka
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ dị iche iche » Namibia na-emechi saịtị ihe nketa ndị njem na ihe ntụzịaka
Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Namibia • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ, Arts, na Omenala Namibia nke onye na-eme ihe nkiri bụ Martin Andjapa binyere aka nyere Namibia ntuziaka a dị mkpa.
Healthtù Ahụ Ike Worldwa ekwuola na COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe zuru ụwa ọnụ. Followinggbaso
Nkwenye nke abụọ COVID-19 ikpe na Namibia site na Ministry of Health and Social Services na 14 March 2020, Onye isi ala, Onye isi ala nke Republic of Namibia, Dr. Hage Geingob, kwupụtara ọkwa mgbochi kwesịrị ekwesị iji mee iji hụ na nchekwa na ahụike nke ndị Namibia niile. Otu ụdị mmachibido iwu bụ igbochi nnukwu nnọkọ niile maka 1 oge nke ụbọchị 30.
In ìhè nke ndabere dị n'elu, Ana m egosi na saịtị nketa niile na-ada n'okpuru ambinke mịnịstrị na-ahụ maka agụmakwụkwọ, Arts na omenaala ga-emechi ọnụ immetụta dị nta ruo oge ọzọ. Ruo oge iwu a na-arụ ọrụ, Ozi ahụ site na nkwado nke
Ministri Ahụike na Ọrụ Ndị Ọrụ ga-aga n'ihu na-enyocha ma nyochaa ọnọdụ ahụ ma na-ekwurịta okwu.
Ka ọ dị ugbu a, a na-agba onye ọ bụla ume ka ọ hụ na ewepụtara usoro mgbochi kwesịrị ekwesị, depụta ntuziaka nke World Health Organisation na Ministry of Health and Social Services